Labo gabdhood oo Sacuudiga u dhashay oo qaylo dhaan ay direen looga jawaabay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Labo gabdhood oo Sacuudiga u dhashay oo qaylo dhaan ay direen looga...
Labo gabdhood oo Sacuudiga u dhashay oo qaylo dhaan ay direen looga jawaabay
Labo gabdhood oo u dhashay Sacuudi Carabiya oo horay u dalbaday in la caawiyo kadib markii ay sheegeen in lix bilood ay sharci darro iyo xaalad hubanti la’aan ah ku joogeen magaalada Hong Kong ayaa hadda waxa ay heleen fiiso ay uga tagi karaan Hong Kong kadib markii ay qoyskooda kasoo baxsadeen.
Rawan iyo Reem (maahan magacyadooda dhabta ah) ayaa sheegay in ay soo baxsadeen xilli ay bishii September ayaga iyo qoskoodu fasax ku joogeen dalka Sri Lanka.
Waxa ay doonayeen in ay tagaan dalka Australia, hase ahaatee waxay sheegeen in masuuliyiinta Hong Kong ay arrintaas ka hor istaageen.
Arrintan ayaa imaanaysa dhowr todobaad uun kadib markii gabadh dhalinyaro ah magangalyo laga siiyey dalka Canada.
Rawan iyo Reem ayaa ku andacooday in masuuliyiinta Sacuudigu ay isku dayeen in garoonka diyaaradaha ee Hong Kong ay kagala laabtaan baasabooradooda.
Waxa ay sheegeen in sidoo kale ay iskudayeen in ay raacaan diyaarad aadaysa Dubai, si ay halkaas uga sii raacan diyaarad kale oo ay sii qabsadeen oo aadi lahayd magaalada Melbourne hase ahaatee laga joojiyey.
Hablahaan oo da’doodu kala tahay, 18 jir iyo 20 jir, ayaa sheegay in aanay doonayn in ay dalkooda ku laabtaan waxa ayna ka cabsanayaan ciqaab iyo xataa in la dilo haddii ay laabtaan.
Mar ay la hadleen laanta BBC-da ee Afka Shiinaha ku hadasha, ayay gabdhahaan walaalaha ahi waxay sheegeen in ay soo maleegeen kaarto ay kusoo baxsadaan ayna arrintaas ku kalliftay in aanay wax karaamo ah ku haysan Sacuudi Carabiya.
Waxa ay sheegeen in la garaaci jiray, la bahdili jiray laguna khasbi jiray iyo ay guryaha uga shaqeeyaan ragga qaraabadooda ah.
“Noloshaydu waxay ahayd in aan ayaga uun u shaqeeyo, aad ayaan u niyad jabay, mana arkayn wax mustaqbal ah” ayay tiri Rawan.
” Wax dan ah kama aanay galayn baahidayda iyo waxbarashadayda toona – waxay diiradda saarayeen uun sidii ay iigu barbaarin lahaayeen in aan noqdo xaas wanaagsan.”
Waxa ay Hong Kong ka tageen isbuucii la soo dhaafay. Dowladda Sacuudigana weli kama aysan jawaabin kiiskan.
Muxuu yahay kiiska?
Rawan, oo 18 sano jira , and Reem oo 20 sano jira ayaa yimid garoonka diyaaradaha ee Hong Kong, kaddib markii ay qoysaskooda ka soo baxsadeen xilli ay booqasho fasax ah u joogeen Sri Lanka.
Balse saraakiisha Sacuudiga ayaa joojisay iyaga oo isku dayay inay waraaqadaha safarka kala haraan, waxaana laga dajiyey garoonka Dubai halkii uu safarkoodii ahaa Australia laga xanibay.
Bishii November, waxaa loo sheegay in baasabooradii lagala noqday.
Waxa ay samaysteen qorsha ay dalka uga tagaan , iyaga oo sheegay in tacadiyado kala duwan loogu gaystay Sacuudiga.
Haweenkan ayaa BBC-da u sheegay in ay ka baxeen diintoodii ayna u baqayaan naftooda haddii si khasab ah loo celiyo. Xukunka qofkii diinta Islaamka ka baxa ayaa ah in la dilo, sida uu dhigayo sharciga Sacuudigu.
Previous articleBERBERA, warka Xilwareejinta wakalada Biyaha berbera1
Next articleCodsi La Xidhiidha Eritrea Oo Madaxweynaha Djibouti U Gudbiyey Dhigiisa Faransiiska
Ex-wasiir Xaglatoosiye oo beeniyey Wararka sheegaya in uu kamid yahay wadahadalo lala yeeshay xisbiga wadni
Ex-wasiir Xaglatoosiye oo beeniyey Wararka sheegaya in uu kamid yahay wadahadalo...